Oke Osimiri Bering: njirimara, nhazi, ụdị ndu na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime oke osimiri a kacha mara amara n'ụwa na nke kewara America na Russia bụ mmiri na-agba mmiri. Aha ya bụ Vitus Jonassen Bering. Ọ bụ ihe gbasara onye nyocha Denmark nke dugara njem na mpaghara Beringia na narị afọ XNUMX. Ọ bụ oke osimiri nke di n’akụkụ ugwu Pacific Ocean n’akụkụ Alaska na Russia. O nwere ụfọdụ njirimara pụrụ iche na ụdị ndụ dị iche iche nke na-atọ ụtọ ịmara.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a ịgwa gị njirimara niile, usoro na ụdị ndụ dị iche iche nke Osimiri Bering.
2 Nhazi nke Oke Osimiri Bering
3 Di iche iche nke Oke Osimiri Bering
Oke Osimiri Bering bụ maka ikewapụ ya na ndị ọzọ Pacific n’ihi ọnụnọ nke Aleutian Islands, na Alaska Peninsula. Otu n'ime akụkụ kachasị ama nke mpaghara a niile bụ Bering Strait. O nwere obosara nke kilomita 85 ma jikọọ na Osimiri Chukchi na Osimiri Arctic. Mpaghara a niile nke jikọtara otu na nke ọzọ bụ Bering Strait.
Ọ bụrụ na anyị eserese site na map tụlee oke osimiri ahụ dum, anyị ga-ahụ na ọ gafere ihe karịrị nde kilomita abụọ na square. Ọdịdị nke oké osimiri a bụ nnọọ ịmata. Ma ọ bụ na ọ nwere ọdịdị triangular ma nwee Bering Strait, Bristol Bay, Gulf of Anadyr na Norton Sound. Na mgbakwunye, oke osimiri a nwere agwaetiti ndị ọzọ gụnyere ndị a: Diomedes, San Mateo Island, Karáguinski Island na Sledge Island, na ihe dị ka okpuru mmiri 16 nke mmiri.
N'ime oke osimiri a, e nwere nrughari mmiri na-asọ ọ na-emetụta Alaskan ugbu a. Mmiri a na-ebute mmiri n'ime bekee a na-esite na iyi a. N'iburu ọdịdị ọdịdị nke oké osimiri a, amaara na ihu ala dị jụụ ebe mmiri miri emi na-ekpo ọkụ. A na-esi n'Oké Osimiri Pasifik webata mmiri na-ekpo ọkụ. Mmiri a na-esite n'ọtụtụ nsogbu nke agwaetiti ndị dị na ndịda.
Uzo ozo di na njiri mara nke oke osimiri a bu na nihi uzo ala ya na ihe di iche iche ebe ugwu di otutu mgbe oyi. N’ozuzu ya ọ bụ oke osimiri oyi dị jụụ. Nwere ike ịhụ na ọtụtụ oge oyi na-ajụ oyi na n'oge ọkọchị ị nwere ike idekọ okpomọkụ mmiri na-erughị ogo zero. N'agbanyeghị ihe mmadụ nwere ike iche, nnu nnu dị na mmiri a dị ezigbo ntakịrị. Enwere ike ịchọta ntakịrị nnu dị n'akụkụ ụfọdụ miri emi. Agbanyeghị, ịdị omimi dị ngbanwe dị etu a, enwere ike ịsị na ọkara nke oke osimiri erughị mita 200. N'akụkụ ụfọdụ, dị n'okpuru 152 mita na ndị ọzọ ọ na-eru omimi nke mita 3.600.
Ebe kacha mie emi nke Oke Osimiri Bering dị na Bowers Basin ihe dị ka mita 4.067 dị omimi.
Nhazi nke Oke Osimiri Bering
Ekwesiri iburu n'uche na, maka okike nke Bering Bering, afọ nke Oke Osimiri Pasific ga-eme atụmatụ, ebe ọ bụ na ọ na-emetụta ya. Afọ e mere atụmatụ ya bụ ihe dị ka nde afọ 750. Mgbe Rodinia, nke a maara dị ka nnukwu mba karịrị otu ijeri afọ gara aga, malitere ịmalite, mpaghara a dum na-aga usoro nkewa. Dịka ala ndị ahụ kewara abụọ, Oke Osimiri Pasifik kewara abụọ ma nye Osimiri Bering.
Oké osimiri a na-akwụsị n’oké osimiri ọzọ Eocene epoch. Akụkụ bụ isi maka ikewapụ akụkụ ndị ọzọ nke oke osimiri bụ nhazi nke aak nke Aleutian Islands. Ejikọtara Oke Osimiri Bering na mbara igwe sara mbara nke agbụ Aleutian Islands na Bering Strait. Ihe ikpo okwu a sitere na nkukota nke ikpo okwu na mmalite nke oge Cretaceous n'etiti ọwụwa anyanwụ Siberia na North Slope Block. North Slope Block bụ mpaghara nke dị na mgbago ugwu Alaska.
Di iche iche nke Oke Osimiri Bering
Dika anyi kwurula na mbu, obu oke osimiri nwere otutu umu anumanu na osisi. Bụrụ nwa oge dị ka ihe eji egwu mmiri nke nwere nnukwu mkpa. Mpaghara arctic niile di n’etiti Russia, Alaska na Canada na erite uru site n’iru ihe di iche-iche a. Nke a bụ n'ihi na n'ime mmiri ya, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ anụmanụ na-enye mmiri, azụ, mollusks, crustaceans na anụmanụ ndị ọzọ nke microscopic size.
Enwere ihe karịrị umu 160 nke algae na-ese n'elu mmiri nke nwere usoro okike ha na Oke Osimiri Bering. Dịka ọmụmaatụ, anyị hụrụ algae buru ibu na-acha aja aja nke nwere ike ịmepụta oke ọhịa na ụfọdụ mmiri. N'ime anụmanụ ndị a na-ahụkarị na Osimiri Bering bụ ndị a:
Nri oriri na mmiri
Nnukwu nshịkọ uhie
Ndepụta na-aga n'ihu. E nwere mkpokọta ụdị azụ azụ 420 enyerela ụba azụ na azụmaahịa ya. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ nsogbu na egwu na-emetụta Oke Osimiri Bering.
Buru n'uche na mmetụta mmadụ na-akpata nsogbu na Oke Osimiri Bering. Ọ bụkwa na ọ bụ mpaghara dị mfe ngbanwe nke okpomoku ụwa. Bụ mpaghara dị n'akụkụ Osimiri Arctic ọ na-emetụta ya site na ịrị elu mmiri n'ihi mgbaze nke oghere ice polar. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na, ebe ọ bụ oke osimiri na-amị mkpụrụ na ịkụ azụ, ọ na-arịa nrigbu na nsogbu kpatara n'ọtụtụ ụdị. Dịka ọmụmaatụ, mpaghara ọdịda anyanwụ dị na steeti ịkụ azụ na iwu na-akwadoghị.
E jiriwo ọtụtụ nnukwu ihe mkpofu ahịhịa na ihe ndị na-egbu egbu merụọ akụkụ nke Oké Osimiri Bering. Nsogbu nke ihe ndị a bụ na ọ na-esiri ha ike iwepụ ya. Ahụwo ọtụtụ anụ anụmanụ dị n'oké osimiri polychlorinated biphenyls nke na-adịgide adịgide na-emetọ mmiri, metụtara nke Mercury, lead, selenium na cadmium. Anyị na-ahụkwa ụfọdụ mmetụta sitere n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri na-egbochi ndụ mmiri na nnukwu ihe egwu mmanụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị kari ịmụtakwu banyere Osimiri Bering.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oké osimiri Bering